Mpizahatany Rosiana nosamborina tany Tiorkia noho ny nanombohan'ny doro tanety tany Antalya
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Turkey Breaking News » Mpizahatany Rosiana nosamborina tany Tiorkia noho ny nanombohan'ny doro tanety tany Antalya
Vaovao Mafana Eoropeana • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Crime • Vaovaom-panjakana • Vaovao • People • tompon'andraikitra • Vaovao Mafana Rosia • Safety • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • malaza ankehitriny • Turkey Breaking News
Rosiana mpizahatany nosamborina tany Tiorkia noho ny nandoro ala.
Ahiahiana ho nanao doro tanety tsy nahy nipoaka teo akaikin'ny toerana fizahan-tany Tiorka malaza ireo mpandeha an-tongotra Rosiana.
Mety ho natomboky ny mpizaha tany Rosiana izay nandeha an-tongotra nanaraka ilay lalana malaza.
Notazonina nandritra ny fanadihadiana mialoha ny raharaha momba ny zava-nitranga ireo mpizahatany Rosiana.
Ny mpamono afo Tiorka dia voatosika ho amin'ny fetrany nandritra ny ady tamin'ny doro tanety tamin'ity taona ity.
Tamin'ny alatsinainy, nosamborin'ny polisy Tiorka andiana mpizahatany Rosiana tao Antalya, taorian’ny nandrenesana doro tanety tany amin’ny faritra misy ala mikitroka any ambanivohitra.
Araka ny fampitam-baovao avy any an-toerana, teratany Rosiana fito no voarohirohy ho nandoro afo tsy nahy nipoaka teo akaikin'ny toerana fizahan-tany malaza.
Nilaza ny manam-pahefana eo an-toerana ao amin'ny faritr'i Çağlarca fa ny afo sabotsy no nanombohan'ny afon-dasy natsangan'ny vondrona mpizahatany Rosiana izay nandeha an-tongotra nanaraka ny lalana malaza Lycian Way.
Araka ny filazan'ny mpitondra tenin'ny iraka diplomatika Rosiana ao Antalya, nanapa-kevitra ny hihazona ireo mpizahatany Rosiana nandritra ny fanadihadiana mialoha ny fitsarana momba ny toe-javatra niseho ny fitsarana.
Olona enina hafa koa no voasambotra tao vorontsiloza tamin’ny volana aogositra, voarohirohy ho nandoro ny faritry ny ala, tamin’ity indray mitoraka ity noho ny fiampangana nandoro. Tsy maintsy niditra an-tsehatra mihitsy ny mpitandro filaminana niaro ireo voarohirohy, izay efa nenjehin’ny fokonolona romotra.
Olona telo hafa no nosamborina tany Bodrum teo aloha taorian'ny filazan'ny polisy fa tratra nanary vodi-tsigara teo amin'ny varavarankelin'ny fiara izy ireo teo am-pamiliana tamin'ny ala maina.
Ny mpamono afo Tiorka dia voatosika ho amin'ny fetra nandritra ny fahavaratra miady amin'ny doro tanety, maro amin'izy ireo no mandrahona toerana malaza mpizahatany manodidina an'i Antalya sy Mugla.
Manodidina ny 107 vorontsiloza Nitaky fepetra maika avy amin'ny mpamono afo ny afo. Olona an-jatony no naratra noho ny fiparitahan’ny hain-trano ary an’arivony no nafindra niala ny tranony.